Taiwan iyo Somaliland Oo Aqalka Cad Uu ku Amaanay xiriirka Cusub Ee ay Yeesheen | Gaaroodi News
Taiwan iyo Somaliland Oo Aqalka Cad Uu ku Amaanay xiriirka Cusub Ee ay Yeesheen
Xafiiska Aqalka Cad u qaabilsan arrimaha Amniga Qaranka ayaa ammaanay galaangalka diblumaasiyadeed ee Tiawan ay ka bilowday Bariga Afrika gaar ahaan “Somaliland.”
Xiriirka xun ee kala dhexeeya Shiinaha ayaa sababay in dowladnimo ay waydo Taiwan oo ah maamul dimuquraadi ah oo xiriir la leh illaa 15 dal oo keli ah, kamana tirsano Qaramada Midoobeey.
Sidoo kale inta badan hay’adaha caalamiga ah waxay xiriir toos ah la leeyihiin Xukuumadda Beijing oo keli ah.
Sidoo kale, Farriinta dowladda Mareykanka waxay imaaneysaa ka dib markii Shiinaha uu sheegay inuu diidan yahay xiriirka diblumaasiyadeed ee Taiwan iyo Somaliland.
Sidoo kale, dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa iyana ka soo hor jeesatay xiriirkaas labada dhinac dhexmaray.
Wuxuu intaa ku daray in “labada dowladood ay ku heshiiyeen billaabidda xiriir ku saleysan saaxiibtinimo iyo wadaagidda qiyamka ay ka mideysan yihiin ee ah xuriyadda, dimuquraadiyadda, cadaaladda iyo sharciga iyo kala dambeynta”.
Wu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland, Yasiin Maxamuud, ayaa wada saxiixay heshiiska laba geesoodka ah oo ka dhacay magaalada Taipei, bishii February ee sannadkan, sida ay warbaahinta Mareykanka qorayaan.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, Zhao Lijian, ayaa sheegay in “dowladdiisa ay sii wadeyso xiriirka ay la leedahay Soomaaliya”.
Mareykanka oo $620 milyan oo gantaallo difaac ah u ansixiyay Taiwan
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Dowladda Mareykanka ayaa ansixisay dhaqaale gaaraya $620 milyan oo dollar oo lagu sii horumarinayo gantaallada dhulka ee Taiwan illaa kuwa circa, sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee maamulka Donald Trump.
Waxay sheegtay in arrintan Mareykanka ay tahay mid lagula tacaalayo “halista sii kordheysa ee Shiinaha”.
Dowladda Mareykanka, sida dowlado kale oo badan, xiriir toos ah oo diblumaasiyadeed lama lahan Taiwan, balse waxaa sharci ku ah in maamulkaas dimuquraadiga ah ay difaacaan, waxkasta oo ay qaadato.
Shiinaha wuxuu aalaaba ka soo horjeestaa in Mareykanka uu hub ka iibiyo Taiwan.
Taiwan waxay codsatay in hubkan casriga ah laga iibiyo “si ay u caawiso sii jiritaankeeda 30-ka sano ee soo socota,” ayey tiri Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Wasaaradda Difaaca ee Taiwan waxay sheegtay in ay fileyso in hubkan ay hesho bisha soo socota.